၀ တ္ထုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်များ၏အမျိုးသမီးဟမ်းစ်တာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ခံနိုင်မှုကြာရှည်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (1988) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အဆိုပါအမျိုးသမီးဟမ်းစတား (1988) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ၏ Duration: အပေါ် Novell ထိုအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါင်းအဖေါ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
မှတ်ချက်များ - လေ့လာမှုတွင် Coolidge ၏သက်ရောက်မှုကိုအမျိုးသမီးများပြသသည်
ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol ပြုမူနေ။ 1988 May; 49 (3): 398-405 ။
မျ့ဘဲလျ GL, Gorzalka BB.
ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်မိတ်လိုက်မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်အတွက်အမျိုးသမီးရွှေဟမ်းစတား (Mesocricetus auratus) ၏ lordosis ကြာချိန်လေ့လာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 များတွင်အမျိုးသမီးတဦးတည်းအထီးဟမ်းစတားတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ၏အချက်မှ mated, နှင့်၎င်း၏ဖယ်ရှားရေးအောက်ပါတစ်စက္ကန့်အထီး၏နိဒါန်းမှတုန့်ပြန်ပြုမှုအသစ် Reception ပြသခဲ့သည်။ ဒုတိယအထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ပေါ်၌အမျိုးသမီးတစ်ဦးဝတ္ထုတတိယအထီးကိုလက်ခံရရှိဒါမှမဟုတ်မူရင်းအထီးမှ reexposed ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဝတ္ထုအထီးကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုထဲတွင်တတိယရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအတွက်စုစုပေါင်း lordosis ကြာချိန်မူရင်းအထီးမှ reexposed အုပ်စုအတွက်ထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု ၂ တွင်၊ ဒုတိယနှင့်တတိယမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်များအကြား ၁ နာရီကြာနှောင့်နှေးမှုကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်တတိယအထီးသည်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အသစ်အထီးရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အမျိုးသမီးများ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
စမ်းသပ်မှု (၃) တွင်၊ သားဥအိမ်များကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှု (စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီ ၇၂ နာရီ၊ အက်ဒီဒီယမ်ဘင်နော့ဇ် ၄၀၊ စမ်းသပ်ခြင်းမတိုင်မီ ၄ နာရီ)၊ စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီ ၄ နာရီအလိုတွင်အမျိုးသမီးများ၏ ၀ တ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်မိတ်လိုက်ခြင်းများအကြားခွဲခြားနိုင်စွမ်းကိုမအောင်မြင်ပါ။ မိတ်ဖက်များ။
ဤရလဒ်သည်ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ကိုထိခိုကျနိုငျအနည်းဆုံး 1 ဇ၏နှောင့်နှေးအောက်ပါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသားအိမ် steroids များလွှတ်ပေးရေးကကမကထပြုခဲ့သည်မဟုတ်ကြောင်းကို, အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းမိတ်လိုက်မိတ်ဖက်အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမခွဲခြားစေသရုပ်ပြပါ။